भगवानको कुन नाम जप गर्ने, यस सन्दर्भमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
साधनाको दृढ आधार बनाउन हाम्रो सुझाव छ कि जुन पन्थमा जन्म लिनु भएको छ, त्यही पन्थ अनुसार देवताको नामजप गर्नुहोस् । ‘आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा आरम्भ गर्नुहोस्’ यो लेखको सन्दर्भ लिनुहोस् ।
कुन देवताको नामजप गर्नु पर्छ यसको सन्दर्भमा सामान्य एवं प्राय: सोधिने प्रश्नहरुको व्याख्या अगाडी दिएको छ ।
१. धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू
१.१ मेरो जन्म बौद्ध परिवारमा भएको हो; तर मैले ईसाई पन्थमा धर्मांतरण गरे । मैले कुन देवताको नामजप गर्नु पर्छ ?
१.२. मेरो जन्म क्याथोलिक परिवारमा भएको थियो, तर मेरो पालन-पोषण प्रोटेस्येन्टमा भएको थियो । मैले ‘हेल मेरी’ जप गर्न प्रयास गरे, तर बारम-बार ‘लोर्ड जीसस’ को नामजप हुन्छ । के यो ठीक हो वा मैले कुन नामजप गर्नु पर्छ ?
१.३ यदि हाम्रो पूर्खाहरु बलपूर्वक अर्को पन्थमा धर्मांतरित गरिएको र हाम्रो जन्म त्यो पन्थमा भयो । यस्तो परिस्थितिमा हामीले कुन देवताको नामजप गर्नु पर्छ ?
उत्तर : अध्यात्म शास्त्र अनुसार हामीले जन्म लिएको पन्थानुसार नामजप गर्नको लागि सल्लाह दिन्छ ।
तपाईको पूर्खाहरु जुन पन्थमा धर्मांतरण भएको थिए, त्यसमा यदि तपाईको श्रद्धा छैन भने एवं आफ्नो पूर्वको पन्थमा धेरै श्रद्धा छ भने पूर्व पन्थानुसार नामजप गर्न सक्नु हुन्छ ।
१.४ मेरो आमा र बाबा फरक पन्थबाट हुनुहुन्छ र उनीहरु सम्बन्धित पन्थको अभ्यास गर्नु हुन्छ । मैले कुन भगवानको नामजप गर्न सक्छु ?
२. विवाहसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू
२.१ म विवाहित स्त्री हु । मैले कुन देवताको नामजप गर्नु पर्छ ?
२.२ म आफ्नो श्रीमानसँग अलग भएको छु, तर हाम्रो सम्बन्ध-विच्छेद भएको छैन, मैले कुन भगवानको नामजप गर्नु पर्छ ?
२.३ म सम्बन्धविच्छेद गरेको स्त्री हुँ, मैले कुन भगवानको नामजप गर्नु पर्छ ?
२.४ म बाल्यकालदेखि नै ‘हेल मेरी’ नामजप गर्छु । अब मेरो विवाह हिन्दू परिवारमा भयो । मैले कुन भगवानको नामजप गर्नु पर्छ ?
३. अंगीकरणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू
३.१. अंगीकरण गर्न लागेको बच्चाले कुन नामजप गर्नु पर्छ ?
४. आफ्नो पन्थानुसार देवताको नामजपसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू
४.१ मलाई ‘हेल मेरी’ नामजप धेरै उत्साहहीन एवं छोटो लाग्दछ । त्यसको स्थानमा के म ‘हेल मेरी, होली मदर ऑफ गॉड’ नामजप गर्न सक्छु ?
उत्तर : अध्यात्म एक विज्ञान हो, औषधि जस्तौ र अधिक विशिष्ट । शास्त्रको पालन गर्नाले एवं मन भन्दा परे गएमा आध्यात्मिक उन्नति हुन्छ । ‘अनेकबाट एक तर्फ जानु ’ यो अध्यात्मको एउटा मूलभूत सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त अनुसार अनेक शब्दको जप गर्नुको तुलनामा एउटा शब्दको नामजप गर्नु धेरै प्रभावशाली हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर, तपाई मदर मेरी सँग प्रार्थना गर्नुहोस् की उहाँले तपाईलाई अध्यात्मशास्त्रानुसार नामजप गर्न क्षमता प्रदान गर्ने कृपा गरोस् । यसपछि पनि यदि तपाई नामजप गर्न सक्नु हुँदैन भने, प्रथम चरणमा ‘हेल मेरी, होली मदर ऑफ गॉड’ नामजप गर्न सक्नु हुन्छ ।
५. कुलदेवतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू
५.१ यदि मलाई कुलदेवताको नाम ज्ञात छैन भने कुन देवताको नामजप गर्नु पर्छ ?
५.२ यस्तो अवस्थामा यदि ‘श्री कुलदेवतायै नम:’ यो नामजप उच्चारण गर्न गह्रो हुन्छ । के म अन्य कुनै नामजप गर्न सक्छुँ ?
५.३ कुलदेवीको स्थानमा के म कुलदेवताको नामजप गर्न सक्छुँ ?
६. मनपर्ने नामजपहरुसँग सम्बन्धित
६.१ मलाई श्रीकृष्ण मन पर्छ । के म कुलदेवताको स्थानमा उहाँको नामजप गर्न सक्छु ?
६.२ म आफ्नो आमाको पूजा गर्छु । उहाँ मेरो लागि गुरु एवं ईश्वर समान हुनु हुन्छ । के म उहाँको नामजप गर्न सक्छु ?
६.३ म हिन्दू हुँ । के म ‘ॐ’ को नामजप गर्न सक्छु ?
६.४ के म सन्तको नामको जप गर्न सक्छु ?
७०% आध्यात्मिक स्तर भएको सन्त, कुनै विशिष्ट कार्य सम्पादनको लागि जन्म लिनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरुमा प्रकट शक्ति हुन्छ । यदि हामी उहाँको नामजप गर्छौं भने, हामीलाई यसबाट कष्ट हुन सक्छन् । यसको विपरीत, देवताहरुमा निर्गुण शक्ति हुन्छ, त्यसैले उहाँको नामजप गर्नाले कुनै समस्या हुँदैन । यस बाहेक साधकलाई शक्ति होइन, आनन्द एवं शान्तिको आवश्यकता हुन्छ । (८०% एवं ९०% आध्यात्मिक स्तरको सन्त क्रमश: आनन्द एवं शान्तिको अनुभूति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ ।)
उत्पत्ति, स्थिति एवं लयको नियम सन्तलाई पनि लागू हुन्छ, त्यसैले: उहाँको शक्ति केही सय वर्षको मर्यादित कालको लागि कार्यरत रहन्छ । त्यसपछि साधकलाई सहयोग गर्न असमर्थ हुन्छन् । यसको विपरीत देवताको अस्तित्त्व विश्वको उत्पत्ति देखि लिएर लयकाल सम्म निरन्तर रहन्छ ।
अध्यात्मशास्त्र अनुसार सन्तको पूजास्थल बनाउनु अयोग्य हो । तर वर्तमान समयमा यो प्राय: भएको हामीले देखन सक्छौं ।
७. अन्य पन्थप्रति झुकाव, यस सन्दर्भमा
७.१ म ईसाई हुँ । के म ‘ॐ’ को नामजप गर्न सक्छु ?
७.२. म ईसाई हुँ, तर मलाई भगवान शिव मन पर्छ, के म उहाँको नामजप गर्न सक्छु ?
८. धर्म देखि विमुखताको सन्दर्भमा
८.१ मलाई नामजपमा रूचि छ, तर मेरो पन्थसॅंग म जोडिएको महसुस गर्दिन । म कुन नामजप गर्न सक्छु ?
८.२ के म केवल ‘ईश्वर’ नामजप गर्न सक्छु ?
८.३ के म ईश्वरको नामजपको सट्टा ‘दयालु’ वा ‘प्रेम’ वा ‘निर्मलता’ वा ‘शान्ति,’ शब्द जप गर्न सक्छु ?
८.४. अहिले म कुनै पनि पन्थको अनुसरण गरिरहेको छैन, मैले कुन देवताको नामजप गर्नु पर्छ ?
८.५ जब म आफू जन्मेको पन्थ अनुसार देवताको नामजप गर्छु, तब मलाई हृदय देखि राम्रो लाग्दैन । म के गरुँ ?
९. नास्तिकतासँग सम्बन्धित
९.१ म नास्तिक हुँ । मैले कुन नामजप गर्नु पर्छ ?